अन्तरवार्ता Archives - Dr. Nawa Raj Subba
सिर्जनालाई पैसासँग तुलना गर्न सकिंदैन — नवराज सुब्बा, साहित्यकार… पछिल्लो समयमा आएर नेपाली साहित्यका पाठक बढ्दै गएका छन् । पाठकको संख्या बढेसँगै नेपाली साहित्यमा राम्रा कृति पनि धमाधम आइरहेका छन् । नाम चलेका र राम्रो कृति प्रकाशित गर्न प्रकाशकहरुले समेत तँछाडमछाड गर्ने अवस्थाको सिर्जना भएको छ । पाठकको संख्या बढ्नु समग्र नेपाली साहित्यकै लागि खुसीको […]
(साहित्यकार नवराज सुब्बासित कवि मीनकुमार नवोदितले सुकुनाको लागि लिनु भएको अन्तर्वार्ता) प्रश्नः तपाईको लेखन कसरी सुरु भयो ? उत्तरः विद्यालय तथा क्याम्पसको विद्यार्थीजीवन अर्थात् तीसको दशक मेरो साहित्यिक यात्राको प्रारम्भिककाल हो । मेरा गुरु, विद्यालयको साहित्यिक तथा सांगीतिक वातावरण र मेरो बाल्यकालको विशिष्ठ वातावरण बीच मेरो साहित्यिकयात्रा आरम्भ भयो । विद्यालय तथा क्याम्पसमा अध्ययनरत रहेको […]
हाल जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय मोरङको वरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक (प्रमुख) पदमा कार्यरत नवराज सुब्बा जनस्वास्थ्य प्रशासक मात्र हैनन् । उनी एक सफल र्सजक पनि हुन् । करिव तीसको दशकदेखि कविता, गीत, निबन्ध, अनुसन्धान लेखनमा अनुभव संगालिसकेको सुब्बाले दर्जन बढी साहित्यीक कृति र संगीत सिर्जना गरिसकेका छन् । उनका जीवन मेरो शब्दकोशमा कवितासङ्ग्रह (२०६३), मनको मझेरी निबन्धसङ्ग्रह […]
स्नातकोत्तर शोधको लागि विद्यार्थी गीता ढकालले शोधनायक नवराज सुब्बासित लिनु भएको अन्तर्वार्ता गीता ढकाल प्रश्न न. १. तपाईको बाल्यकाल र विद्यार्थी जीवनको सङ्क्षिप्त चिनारी लेखिदिनु हुन्छ कि ? नवराज सुब्बाः माद्यमिक विद्यालयस्तरसम्म म कक्षाको पहिलो विद्यार्थी थिएँ । उमेरको हिसाबले कलिलो भए पनि म पढाइमा लगनशील र जेहेन्दार थिएँ । यसैले म सबै गुरुहरुको प्रिय […]
लिम्बुवान ब्लगर टंक सम्वाहाम्फेले गर्नु भएको कुराकानी कवि,गीतकार तथा गायक नवराज सुब्बा हाङपाङ आठर्राई जिल्ला ताप्लेजुङमा जन्मनु भएको हो । उहाँले एम.ए. (नेपाली), एम.पी.एच (जनस्वास्थ्य) शिक्षा ग्रहण गरिसक्नु भएको छ भने विद्यावारिधि गर्ने क्रममा हुनुहुन्छ ।जीवन मेरो शब्दकोशमा -कवितासंग्रह, वाणी प्रकाशन, बिराटनगर, २०६३,जनस्वास्थ्य पाटा, बाटा र अनुभूति -लेखसंग्रह, वाणी प्रकाशन, बिराटनगर, २०६३,राजबंशी समुदायको स्वास्थ्यस्थितिको अध्ययन, […]